I-BASELWORLD 2018 - Inokuzithuthuzela ukuhamba kunye neTransfer Service yaseBasel -
Yonke intsuku yaseBasel isingatha kwiinkampani ze-1800 ezibonisa ukubukela kwazo kunye neendalo zezinto zokugcoba kwi-Baselword. Akukho mfuneko yokukhalaza malunga nenani leendwendwe kule ndawo ebalulekileyo yokurhweba, kuba njengoko ngonyaka, i-2017 kulindeleke ukuba imelwe ngabadayisi be-100.000 kunye nabameli be-World Watch kunye ne-Show Jewelryery. Nge-22 Matshi i-2018 amasango e-fairly will open for the flow of visitors.
Drayivu ngokukhawuleza kwi-BASELWORD - iBhasel yeNkonzo yokuTshintshela
I-EuroAirport yaseBasel yimizuzu embalwa ngemoto ukusuka kwindawo yokubonisa. Kodwa ngokuqinisekileyo ufuna - njengabanye abahamba ngezoshishino-ukutyelela umbonisi womenzi kwiintsuku eziliqela. Ngokuphindaphindiweyo abagibeli bethu basitshela ukuba iingxoxo kunye neengxoxo kunye nabakhiqizi, ezininzi iimpawu ezintsha kunye neendlela ezihamba ngayo kwiiholo zemboniso ziintsuku ezixinzeleleyo kwiinkampani zoshishino. Yingakho sinikela ngenkonzo yokuqhuba umqhubi wodwa ngexesha leBaselworld.
Ngepakethe ekhangayo uya kufika ngokukhuselekileyo kwaye ngokukhuselekileyo e hotele okanye ngokuthe ngqo ukusuka kwisiza sezindiza saseBasel ukuya kwiindawo zakho zokuqeshwa. Bahamba ngesitayela First Class yokuthuthwa Isiqulatho saseJamani kwaye asinakuxhalabisa ngesithuthi esinzima okanye ukupaka okuncinci kwiziko lemiboniso. Ukongeza kwixesha lokuhamba kunye neentlonelo zabasemagunyeni bethu, sithandwa kakhulu kubantu boshishini kuba siyiqwalasela ingqiqo enkulu ngexesha lohambo.
Ukuthunyelwa kweNkonzo yaseBasel kulula ukubhuka kwi-intanethi
Siyazi-ixesha liyimali. Yingakho sinesinye senu isixhobo lokubhukisha intanethi linempahla. Ngehora elilodwa elihamba phambili, silungele wena njenge-limousine yangasese kunye nomqhubi phambi kwebhokisi lakho lehotele okanye kwisikhululo-moya kwindawo yokufika nokuhamba.
Iqela le-Transfer Service yaseBasel linqwenela ukuba uhlale unomdla kwiBaselworld kwaye uhlala ushishino oluhle
Kuphawulwe: I-shuttle ye-Airport Baselworld Ukuthunyelwa kweenqwelo Ukutshintshiselwa kwezoqoqosho Inkonzo yokudlulisa
taxi.flughafen Matshi 16, 2017 Novemba 18, 2017 Basel, moya Shuttle, inkonzo yokuthuthwa Akukho gqabaza
← Inkonzo yokudlulisa i-360 ° yeendwendwe zeehotele eBasel
I-BASELWORLD 2018 - Hamba ukhululekile kunye ne-Transfer Service yaseBasel →